❤️ Amaqhinga Angcono Kakhulu Okukhula kwe-Instagram namathiphu ka-2021 - Facebook
Amasu Angcono Kakhulu Okukhula kwe-Instagram namathiphu ka-2021
I-Instagram ingenye yezinkundla zokuxhumana ezinethonya kakhulu emakethe namuhla. Umqondo wokuxoxisana uwuhlobo lwemali ezinkundleni zokuxhumana. Izindlela Zokukhulisa I-Instagram Zizokusiza Uthuthukise Ukuba Khona Kwakho Ku-inthanethi, futhi ukuzibandakanya okwengeziwe iphrofayela yakho ye-Instagram izozuza kukho, kanye nawe uzothola abalandeli ku-Instagram.
Ngaphezu kwalokho, izinkampani ziqhudelana ngokuzibandakanya okukhulu, njengoba abantu abaningi behlanganyela nokuqukethwe, maningi amathuba okuthi iboniswe kwabanye abasebenzisi.
Ngaphandle kwalokho, ukuqonda indawo yezentengiso yedijithali yisinyathelo sokuqala sokuqonda ukuthi yini okukhona nokuthi abantu bazibandakanya kanjani kukho. Ukwazi ukuthi yiziphi izitayela zamanje zenkundla yezokuxhumana nomongo kungakusiza ukuthi unqume ukuthi ungayikhulisa kanjani i-Instagram yakho..
Amathiphu namasu wokukhula amahle kakhulu we-Instagram
Nazi izindlela ezifakazelwe zokukhulisa ukukhula kwe-Instagram ngamakhasimende angaba khona futhi ukhulise ibhizinisi lakho ngo-2021.
Facebook. Ukuze ulungiselele
Uma unebhizinisi noma unomkhiqizo womuntu siqu, kufanele usebenzise i-akhawunti ye-Instagram yobuchwepheshe. Ngale ndlela, uyakwazi ukulawula iphrofayili yakho ye-Instagram futhi uyakwazi ukufinyelela inqwaba yedatha ye-Instagram ukukusiza ukuthi wenze ngcono isu lakho..
Ngaphandle kwalokho, futhi unenketho yokwengeza inkinobho yokuxhumana esiza ukuxhumana nabasebenzisi. I-akhawunti yebhizinisi iphinde icabange ukuthi ungasebenzisa izikhangiso.. Izikhangiso = izivakashi eziningi nokuthengisa. Enye inzuzo ukuhlolwa kwe-beta kwangaphambi kwesikhathi kwezici ezintsha.
Wonke umuntu uyazi ngokubaluleka ama-hashtag, kodwa bambalwa abantu abawasebenzisa ngokuhlakanipha. Idatha ilawula uhlelo lwe-Instagram, futhi indlela ye-hashtag ingakhuphula ukukhula kwabalandeli be-Instagram.
Cishe uzwile ukuthi ama-hashtag ayishumi nanye alungile. Noma ama-hashtag e-Instagram angasebenzi. Umgomo ukukhetha i-hashtag ehambisana nokuthunyelwe kwakho kwe-Instagram.
Yini enye, ungasebenzisi ama-hashtag amaningi ngangokunokwenzeka ahambisana nezithameli zakho ozihlosile, kungathinta ukuzibandakanya kwakho.
Ama-hashtag e-Instagram asetshenziselwa ukuchaza i-algorithm. Isiza isistimu inqume ukuthi ubani okufanele abone okuthunyelwe kwakho.
Cabangela uhlobo lokuthunyelwe kwe-Instagram ozolishicilela kanye nezithameli oziqondise.
Ngaphandle kwalokho, cabanga ukuthi yimaphi ama-hashtag izilaleli zakho oqondisiwe ezisebenzisayo bese uzama ukuzifaka kokuqukethwe kwakho. I-hashtag enebhrendi ingasebenza uma ibhizinisi lakho laziwa kahle ku-niche yakho.
Ihora elitshalwe kuqhinga le-hashtag lingakusiza ukuthi uqondise izethameli zakho ngokuqondile kakhulu.
Facebook. Thola Ulwazi Kwabancintisana Nakho
Njengomgqugquzeli, kungazuzisa ukufunda okuningi ngangokunokwenzeka emikhubeni emihle yezimbangi zakho ku-Instagram. Awufuni ukubalingisa ngokusobala, kodwa ungakwazi ukufanisa indlela yabo yokubhala kwabo kwe-Instagram nokusebenzisana phakathi kwabalandeli babo.
Ngaphandle kwalokho, uma kufanele ugweme ukwenza ugaxekile kulawa ma-akhawunti, ungabakhombisa ukuthi uyabakhathalela ngokushiya iLike noma ubeke amazwana kokuthunyelwe kwabo.
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe. Constance
Ukungaguquguquki ekushicilelweni kungenye yezici ezibalulekile okufanele zikhunjulwe. Ukuthunyelwa kwansuku zonke noma kabili kwansuku zonke kwe-Instagram kufakazelwe ukuthi kwenyusa intuthuko. Kungcono kunokukhokhela ukukhula kwe-Instagram noma ukuthenga abalandeli mbumbulu.
Yini enye, izethameli ziyabona ukuthi uzinikele ekuletheni okuqukethwe okuhle njalo. Uba umkhiqizi wokuqukethwe okufanele ube nakho kwezokuzijabulisa, izimpahla noma amasevisi owakhangisayo.
Ngaphandle kwalokho, kuthatha isikhathi ukudala umlandeli we-Instagram ohlanganyele, futhi kufanele ungaguquguquki emizamweni yakho.
isebenzisa indlela yokuzenzakalela yesitayela esithi Landela/Yeka ukulandela enezici ezimbalwa ezengeziwe. Izindaba Instagram
Izindaba ze-Instagram iqale njenge-clone yezindaba ze-Snapchat futhi manje isithathe imakethe. Ngo-2021, kuzoba nezindaba ze-Instagram ezingaphezu kwezigidi ezingama-400 ezilandwa nsuku zonke, enamabhizinisi angaphezu kwezigidi ezi-2 asebenzisa Izindaba ze-Instagram.
Ngaphandle kwalokho, ukutshala imali ezindabeni ezimbalwa ezilula ze-Instagram nsuku zonke kungaba nomthelela omkhulu ekubandakanyekeni kwezithameli zakho.
Iphrofayili yakho ye-Instagram izosebenza njengewebhusayithi yesibili yebhizinisi lakho. Kwezinye izimo, ingase ikwazi ukwenza okungaphezu kwekhasi lewebhu elimile. Kwakha ukwethenjwa komkhiqizo, ubufakazi bomphakathi kanye nokuxhumana okuyiqiniso namathemba akho kanye nabathengi. Ukuthengisa ukukhula kwe-Instagram kuyithuluzi lokugcina lebhizinisi lika-2021, futhi izinkampani ezihlakaniphe kakhulu zizosebenzisa ngokugcwele.
Ithuluzi elihle kakhulu lokukhulisa i-Instagram
I-Instagram ngeke ingivumele ngingene : Facebook
ungase ufaneleke isikhathi eside, ukuvinjelwa okungapheli?
Ungaxhumana Kanjani nabathonya ku-Instagram
Uyengeza kanjani indaba ku-Instagram
I-Auto Like Instagram: I-Bot Yokuthandwa Okuzenzakalelayo
23 Izindlela zika-2021Ungabathola Kanjani Abalandeli Abengeziwe ku-Instagram Sheet Sheet : #Umhlahlandlela n ° 1
23 Izindlela zika-2021Uyenza Kanjani Imali ku-Instagram Ngaphandle Kwabalandeli 2021 : 9 Izindlela zokwenza
23 Izindlela zika-2021 -
Ungaxhaswa kanjani ku-Instagram : Umhlahlandlela Wama-Akhawunti Amancane
23 Izindlela zika-2021
© 23 Izindlela zika-2021 - WinchesClub.com Inqubomgomo yobumfihlo